Andro: 25 Novambra 2019
Ho fohy ny ora fitsangatsanganana any Ankara Istanbul YHT Line
Ho fohy kokoa ny ora fitsangatsanganana eny amin'ny làlana Ankara YHT; Ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Cahit Turhan dia hanatsahatra ny fotoana fitaterana amin'ny fiaran-dalamby (YHT) amin'ny zotra Ankara-Istanbul. [More ...]
500 Fidan avy ao amin'ny Kayseri Transportation Inc.
500 Fidan avy ao amin'ny Kayseri Transportation Inc. Transportation Inc. ao anaty kaominin'i Kayseri Metropolitan. Namboly zana-bera 500 tao amin'ny tohodrano Sarımsaklı izy, tamin'ny fampidirany vaovao amin'ny asa fambolena nentim-paharazana. Tao anatin'ny kaominin'ny Metropolitan [More ...]
Fiaran-dalamby haingam-pandeha 4 avo lenta ao Bursa
Biraom-by hafainganam-pandeha ambony haingam-pandeha 4; Haingana ny anaran'i Bursa, miadana ny tetik'asa fiaran-dalamby, araka ny filazan'ny fananganana nanorina, 2 no 4. Yüksel fiaran-dalamby haingam-pandeha ambony… Ny fanamboarana dia tsy notontosaina araka izay nokasaina. 3 taona lasa izay… [More ...]
4 Billion Dollar maridrefy haingam-pandeha ambony any Ankara mankany Kapıkule
4 Billion Dollar maridrefy haingam-pandeha ambony avy any Ankara mankany Kapıkule; Mehmet Cahit Turhan, minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa dia nilaza: 'Tamin'ny fifanarahana ara-bola nataonay dia nandalo teo amin'ny tetezana Yavuz Sultan Selim i Adapazarı. Halkalına avy any [More ...]
Aiza no hividianana solika menaka 145.000 LT
Dia mandalo eo ambanin'ny tany ve ilay lakilasy mampisaraka Atakum?
Dia mandalo eo ambanin'ny tany ve ilay lakilasy mampisaraka Atakum? ; Samsun Metropolitan'ny Ben'ny tanàna Metropolitan Mustafa Demir dia nanambara fa ny tsipika làlam-by mamakivaky Atakum dia mizara roa ny distrika. [More ...]
TULOMSAS 1 Mpiasa mandresy lahatra dia handray; Torkia loha masiny sy Engine Industry Corporation General Tale (TULOMSAS), fanambaràna fandraisana mpiasa vaovao dia nivoaka tao amin'ny Gazette Official. Navoakan'ny KPSS fepetra tsy misy fampandrenesana [More ...]
110 Million Euro Loan avy any Deutsche Bank ho an'ny Sultanbeyli Çekmeköy Subway
110 Million Euro Loan avy any Deutsche Bank ho an'ny Sultanbeyli Çekmeköy Subway; Imamoglu, filohan'ny IMM, dia nilaza fa nanangana ekipa manakaiky ny 20 izy ireo, indrindra fa amin'ny faritry ny seranam-piaramanidina Ataturk sy ny tetikasa Channel Istanbul. İmamoğlu, [More ...]
22 Staff Staff dia nomena tamin'ny TCDD; Raha ny antom-baovao voaray tao amin'ny Gazety ofisialy TCDD'ye 22 mpiasam-panjakana dia nambara ihany koa fa nofoanana ny sasantsasany ao amin'ny sampan-draharahan'ny faritany dia nofoanana. 6 tamin'ny Novambra 2019 [More ...]
Ny fivondronan'ny Metropolitan Istanbul, 23 taorian'ny fifidianana Istanbul tamin'ny volana jona dia nofoanana, 'Yenikapi - seranam-piaramanidina Ataturk Fahazavana Metro Line Level Stations Capacity Hitombo', nohavaozina. Hiverina amin'ny 3 desambra ny malemy fanahy. Yenikapı Atatürk [More ...]
Androany amin'ny tantara: Minitra 25 Novambra 1899 Ministro
Androany ao amin'ny tantara 25 Novambra 1899 Ny Birao Mpanolotsaina Ottoman dia nankatoavina ny Fifanarahana Railway-Baghdad taorian'ny ora maromaro nifampiresahana. Koa; 10, orinasa iray alemà antsoina hoe Anatolian Railway, avy any Konya ka Baghdad ary [More ...]